Tonga Ao Hong Kong Ny Kamiao Fivarotan-tsakafo, Saingy Tsy Ny Rehetra No Milahatra Amin’izany · Global Voices teny Malagasy
Tonga Ao Hong Kong Ny Kamiao Fivarotan-tsakafo, Saingy Tsy Ny Rehetra No Milahatra Amin'izany
Voadika ny 17 Aogositra 2016 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, 日本語, 繁體中文, English
Sekreteran'ny Varotra Gregory So ao Hong Kong mitsidika kamiao iray fivarotan-tsakafo ao Aostralia tamin'ny volana Aogositra. Sary avy amin'ny Facebook-n'i Gregory So, tao amin'ny HKFP.
Nidera ny tontolon'ny sakafo ao Hong Kong ny olona manerantany noho ny fahamaroan'ny karazany sy ny tolotra iraisampirenena ataony. Sambany hatramin'izay, nampiditra ny sakafo eny an-dalambe ao an-tanàna tao anatin'ny fitarihan-dalany amin'ny nahandro ao an-toerana ao Hong Kong ny Michelin tamin'ny taondasa. Tokony hanampy loko vaovao ao anatin'ity bemirain-tsakafo ity ny fahatongavan'ny kamiao fivarotan-tsakafo, saingy heverin'ny mponina ao an-toerana ho tsy sahaza ny tontolo ity zava-nohafarana ity.
Nipoitra voalohany toy ny fandraisana andraikitra ara-pizahan-tany tamin'ny Kabary Ara-Tetibola 2015-2016 ny hevitra hampiditra ny kamiao fivarotan-tsakafo. Taorian'ny fandinihana naharitra herintaona, natomboka tamin'ny 30 Martsa 2016 ihany ny Tetikasa Fitaratra Kamiao Fivarotan-tsakafo.
Nitady tolo-barotra ampahibemaso ny fitondram-panjakana ary namoaka fahazoan-dàlana 16 hanaovana tetikasa filamatra. Henjana ny fifaninanana: mitotaly 192 ireo fangatahana hifaninana hahazo ajara amin'ny fahazoan-dalana 16. Tsy maintsy mandefa tolo-barotra nosoratan-tanana ireo mpifaninana, ary manomana HK $ 600.000 (manodidina ny 77.400 dolara Amerikana) amin'ny vidin'ny start-up (orinasa kely vao nosokafana) ahafahana mampiasa lakozia mahafeno ireo fenitra ara-pahadiovana tena henjana. Ireo izay voafantina dia miditra amin'ny fifaninanana nahandro ary mampiseho ny karazan-tsakafon'izy ireo amin'ireo manampahaizana momba ny sakafo sy ny solontenan'ny indostrian'ny fitetezan-tany, ny solontenan'ny tompon-toerana hanaovana ny hetsika kamiao fivarotan-tsakafo ary ny manampahefam-panjakana.
Araka ny efa nampoizina, niafara teo am-pelatanan'ireo sampan'ny orinasa lehibe ara-tsakafo, izay nampiasa ny traikefan'izy ireo amin'ny orinasan'ny fast-food (sakafo maivana) ny antsasany mahery tamin'ireo fahazoan-dalana.
Maro, na izany aza, no mihevitra fa natao tamin'ny tsy rariny sy ratsy endrika ilay tetikasa kamiao fivarotan-tsakafo. Kenneth Ip, mpanao maripanorenana eo an-toerana, ohatra, nitsikera ny dingana fanomezana fahazoan-dalana ho mamono ny toe-tsaina mitsinjo ny eny ifotony. Hoy izy tao amin'ny lahatsoratra iray navoaka tao amin'ny Free Press Hong Kong :
ireo izay te-hitsapa vintana amin'ny fitrandrahana ny tetikasa kamiao fivarotan-tsakafo ao Hong Kong dia mila manomana tolo-kevitra mamaritra ny karazan-tsakafo tian'izy ireo atolotra (amidy), ny endriky ny kamiao sy ny fahatanjahan'ny tetibolan'izy ireo. Toy ny fanehoana tsy fahaiza-mitantana sy mifanohitra tanteraka amin'ny toe-tsaina mitsinjo ny eny ifotony ny dingana manontolo ary nampitombo ny kolontsaina fivarotan-tsakafo anaty kamiao.
Eny tokoa, na dia nomena tombony isa folo tamin'ny dingana fandinihana ireo fahazoan-dalana aza ireo mpandraharaha madinika ao an-toerana, dia ambony loatra ny vola ilaina amin'ny start-up sy ny fitantanana ny lakozia noho ny fepetra henjana ara-pahadiovana takian'ny governemanta.
Niady hevitra ihany koa i Kenneth fa ny endriky ny kamiao fivarotan-tsakafo dia mifangarika amin'ny tontolo an-drenivohitra ao an-toerana:
Tsy kisendrasendra raha avy ao Los Angeles, tanàna fanta-daza amin'ny kolontsaina momba ny fiara ananany, no nisandratan'ny kamiao fivarotan-tsakafo matsiro. Los Angeles dia tanàna naorina momba ny fiara, miaraka amin'ny foto-drafitrasa goavana toy ny toeram-piantsonana (parking), mamela ny kamiao fivarotan-tsakafo hiroborobo. Mifanohitra amin'izany, Hong Kong dia tanàna fantatra kokoa amin'ny tsy fahampian'ny toerana sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Sarotra ny tsy handray ny fanapahan-kevitry ny governemanta momba ny kamiao fivarotan-tsakafo ho toy ny fanaovana letrezana fotsiny ny kolontsaina vahiny ao Hong Kong, notapahana tsy araka ny toe-java-misy ary tsy misy fandinihana raha sahaza ho an'ny tanàna ny fampidirana kamiao tahaka izany.
Raha voalaza fa nampiseho ny kolontsaina sakafo Tandrefana-Tatsinanana nampiarahana ao Hong Kong ny nahandro nandresy, nitaraina kosa ny mponina eo an-toerana fa manaratsy ny tena tsiron'ny nahandro ao an-toerana izany. Tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny lahatsoratra momba ny fifaninanana kamiao fivarotan-tsakafo, nizara ny fahatezerany ny mpamaky sasany:
Tsy nisy nahandro ireo tsakitsaky takatry ny rehetra ao an-toerana tahaka ny henabaolina trondro-hena, trondro baolina, tsinainken'omby, trondro nendasina nofonosina legioma …ny ankamaroan'ireo mpifaninana tafakatra tany amin'ny famaranana. Raha mijery fotsiny ny anarana sy ny sary amin'ny sakafo, toa hita fa tsy haingana sy tsotra araka ny tokony ho izy ny fomba fahandro. Rehefa miasa avy eo ny kamiao fivarotan-tsakafo, dia ny fametrahana vidin-tsakafo no lakileny. Raha amidy mihoatra ny HKD$30 ny sakafo tsirairay. Inona no mampiavaka azy amin'ny varotra sy ny tombontsoa ara-pifaninanana? (Ary ankafizin'izy ireo ny ampihimamba ao amin'ny toerana voatondro.)
Mba fantatr'ireo mpitsara mpfantina ve hoe inona no tsakitsaky an-dalamben'i Hong Kong?
Ary inona no lazaina amin'ny fahatsiarovan'ny mponina ao an-toerana ny fahiny amin'izany fifangaroana ny magazain'ny sakafo sy ny sarety fivarotan-tsakafo eny an-dalana izany? Ny sakana lehibe indrindra amin'izany fifohazana izany dia ny fepetran'ny governemanta amin'ny fahasalamana sy ny fiarovana. Fa tsy ny fisafoana henjana kokoa atao amin'ireo toerana sy ny lalàna henjana ho an'ny asan'ny orinasa, nisafidy fotsiny hamoaka fahazoan-dalana vitsy ho an'ireo mpivarotra ny manampahefam-panjakana.
Mba hanavotana ny kolontsaina ara-tsakafo eny an-dalambe mihamanjavona ao an-toerana, maro ny vondron’ olom-pirenena nanolo-kevitra ny programan'ny sarety fivarotan-tsakafo, mandrisika ny governemanta mba hamoaka indray “fahazoan-dalana ho an'ny mpivaro-mandeha” eny an-dalambe eny ifotony. Mitaky manodidina ny 1000 dolara Amerikana ny vola ilaina amin'ny start-up ary manolotra sosokevitra sarety endrika bisikileta novaina izay mifanendrika amin'ny tontolo andrenivohitry ny tanàna.
Tsy tokony ferana ho an'ireo toerana ara-pizahan-tany ny tolotra sakafo mandehandeha. Tokony ampiasa ny sehatra ankalamanjana sy ny toerana babangoana ao amin'ny faritra andrenivohitra izy, tahaka ny zaridaina, ny toeram-panariana fako, toerana ambanin'ny tetezana sy ny sisa, ka afaka mampiasa ny tolotra ihany koa ny mponina ao an-toerana.
Ny filàn'ny mpizaha-tany sy ny orinasan'ny sakafo ihany no mahazo tombontsoa amin'ny tolo-kevitry ny governemanta. Afaka mampiroborobo ny kolontsaina ara-tsakafo isan-karazany kokoa ny tetikasa maro eny ifotony, mamorona asa sy mampiasa ireo toerana kely tsy misy mampiasa ao amin'ny fiarahamonina mba hanome sakafo mora vidy ho an'ny mponina eo an-toerana. Tokony hitondra soa ho an'ny rehetra ny tetikasa.
Lasa fanampiana ho an'ny traboinan'ny tondradrano vokatry ny rivodoza ny fampidirana “fahana” amin'ny finday any Filipina
Mpitati-baovao any Hong Kong nitantara ny famoretana ny fahalalahan'ny asa fanoratana an-gazety araka ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena
Bibilava miloko fotsy miisa roa, voalohany amin'ny karazany eto an-tany, hita tao Nepal